Home EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Nigeria Nwankwo Kanu Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Nke Na-adịghị Eke
LB na-egosi Full Story of a Nigerian Nigerian Soccer Legend nke kacha mara amara na Aha Nickname; "Papulu". Nwankwo Anyị Nyere Ụmụntakịrị Akụkọ na akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma Akụkọ eziokwu na-ewetara gị ihe ndekọ zuru ezu nke ihe omume site n'oge ọ bụ nwata ruo ụbọchị. Ntugharia ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ndu ya na otutu ihe di na ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere nkà ya nwere ọgụgụ isi mana ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Kanu nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Nwankwo Kanu Nwatakiri Akụkọ nke Na -Ndụ mbido
Nwankwo Kanu mụrụ na 1st ụbọchị nke August 1976 na Owerri, Imo, Nigeria. Aha nna ya, Nwankwo, pụtara 'Nwa amuru na Nkwo market day' n'asụsụ Igbo. A mụrụ ya n'aka Susan Susan, nne ya na nna ya, Mr Iheme Kanu, onye bụ nwa amaala Okija na Ihiala LGA nke Anambra State, Nigeria.
Kanu toro na Owerri, Nigeria na ụmụnne ya; (Christopher na Ogbonna Kanu) na stepbrothers; Anderson Gabolalmo Kanu na Henry Isaac. Ọ malitere ọrụ ya na Ngwá Ọrụ Federation Federation, nke na-aga n'ihu, tupu ya akwaga na Iwuanyanwu Nationale.
Ndị na-egwu egwuregwu nke Super Eagles, Kanu Nwankwo ka dị afọ iri na ụma mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama mgbe o jisịrị mba ya merie FIFA n'okpuru 17 World Cup na Golden Eaglets; n'ime ọnwa, ọ nọ na nrọ ahụ, soro AFC Ajax na 1993 maka € 207,047.
Nwankwo Kanu Nwatakiri Akụkọ nke Na -Egwuregwu Olympic
Kanu na-elekọta ya ozugbo Ndi Naijiria nke meriri ọlaedo n'egwuregwu Olympic. Egwu na-eche na ndị Naijiria, Kanu meriri ihe mgbaru ọsọ abụọ na njedebe na njedebe ọ bụla megide ụlọ nkwari akụ Brazil iji kpoo 2-3 akara na mmeri 4-3 n'oge oge.
A kpọkwara Kanu Onye Afrika nke Afrika maka afọ ahụ nile na ekele ya maka itinye aka ná mmeri 1996 nke mba ya.
Nwankwo Kanu Nwatakiri Akụkọ nke Na -Ndụ mmekọrịta
Kanu na nwunye Amarachi nwere obi ụtọ. Dị nnọọ ka Naijiria Omotola Ekeedde, Amara Nwankwo lụrụ di na nwata (mgbe ọ dị afọ 18). Dị ka nwanyị ahụ a ma ama, ọ hụrụ ya n'anya na onye ọkpụkpọ nke Arsenal na-egosi na afọ dị nnọọ ọnụ ọgụgụ ya. Kanu bụ 10 afọ karịa Amara.
Amarachi Amara na Ịhụnanya
N'okwu ya ..."Enweghị m ụjọ. Ọ dị m ka ọ bụ ihe kachasị mma nke gaara eme m. Enwere m ịhụnanya; n'ihi ya, ọ dịghị oge maka mmetụta na-adịghị mma dị ka egwu ịbịa.
Gị onwe m abụghị dị njikere ka a tụba gị aka. Amaghịdị m ihe m na-etinye onwe m n'ime oge. Adịghị m onye na-agba bọmbụ na amaghị m ihe ọ bụla gbasara enweghị mmalite nke ịhapụ n'ụsọ osimiri Naijiria. Ugbu a, agawo m ebe dị anya na ebe dum ma bụrụ onye na-agba bọl " Amarachi kwuru.
Kanu na Amarachukwu (foto foto)
Mgbe alụmdi na nwunye ya gasịrị, ịmụ nwa na-esochighị oge. Ugbu a, ha nwere ụmụ atọ; ụmụ nwoke abụọ (Iyang Onyekachi Kanu), (Sean Chukwudi Kanu) na nwa agbọghọ (Pinky Amarachi Kanu).
Kanu Nwankwo's Children (Ebe E Si Nweta BuzzNigeria)
N'okpuru ebe a bu foto zuru oke banyere Kanu na nwunye ya na umu ya.
Foto Nnekwo Kanu Nwankwo
Nwunye Kanu, Amara ji n'aka na ya gụsịrị akwụkwọ mgbe ya lụrụ. Ọ gara n'ihu inweta akararịrị mbụ na Nhazi. Ọ gụkwara diplọma tupu ọmụmụ nwa ya nwaanyị. Ọ dịbeghị anya, ọ nwetara MBA ya.
Sean bụ nwa mbụ nke mbụ ndị Nigeria na-agbaso nzọụkwụ nna ya dị ka ndị ịgba egwu. Sean (nke kachasị elu) nwere ihe mgbaru ọsọ anọ n'otu egwuregwu maka otu ya.
Nwa Kanu Nwa Nwankwo - Onye ukwu na onye kacha mma n'òtù ya
Dị ka n'oge ederede, ọ na-arụ ọrụ ugbu a maka òtù Under-11 nke Bekee, Watford.
Nwunye Kanu mgbe ọ nụrụ ozi ọma ahụ weere na Instagram iji kesaa ọṅụ ya ede:
"Enfield mmeri !!! Onye nkedo. Ekelere nwa m nwoke na ndị otu ya maka mmeri Enfield football maka ụlọ akwụkwọ gị. Nwa m nwoke Sean. My scorer oke. A naghị ahụ ọrụ gị, nraranye na ọmịiko gị. Ị na-eme m ka m nwee ike ịghọ mama gị. Nri gri. Ngọzi ka ukwuu. I kwesiri ya, "
Ezigbo nne dere na Instagram.
Nwankwo Kanu Nwatakiri Akụkọ nke Na -Linda Ikeji Ties
Kedu ihe na-eme ma ọ bụrụ na nwanna nwanyị nke nnukwu blogger nke Nigeria na-alụ nwanne nke otu n'ime ndị na-agba ọsọ agba ọsọ nke Nigeria?
Nwanne nwanyị nke ozo nke Linda Ikeji, Laura Ikeji Kanu luru nwanne nwanne Kanu Nwankwo, Ogbonna Kanu, n'obodo nta nke Nkwerre, na Imo State, Naijiria.
Ogbonna Kanu di na Laura Ikeji
Nwankwo Kanu Nwatakiri Akụkọ nke Na -Personality
Nwankwo Kanu nwere àgwà na-esote ya.
Ike Kanu: Ọ bụ Onye na-eme ihe, onye nwere obi ụtọ, onye na-emesapụ aka, onye nwere obi ụtọ, nke obi ụtọ na nke ọchị.
Ahụhụ Kanu: Ọ nwere ike ịbụ onye umengwụ na onye na-enweghị mgbagha.
Ihe Kanu nwere mmasị: Ụlọ ihe nkiri, na-eme ememe, na-adọrọ mmasị, ihe dị oke ọnụ, na-egbukepụ egbukepụ ma na-ekpori ndụ na ndị enyi.
Ihe Kanu achọghị: A na-eleghara ya anya, na-eche eziokwu siri ike ihu, na a dịghị emeso ya dị ka eze.
Ihe kachasị mkpa, Kanu bụ onye a mụrụ mgbe ọ hụrụ na ọ bụ onyeisi ndị nchịkwa Naijiria maka afọ 14. E nwere "eze nke ọhịa" mgbe niile. Nke a bụ ya mere o ji họrọ ịlụ nwa agbọghọ bụ 10 dị obere karịa ya.
Nwankwo Kanu Nwatakiri Akụkọ nke Na -Auto
Kanu bụ onye na-ahụ ụgbọ okporo ígwè Ferrari. N'okpuru ebe a bụ Akụkọ Ihe Ochie na ụmụ ya ndị nọ na Ferraris.
Kanu nwere ụmụ ya
Nwankwo Kanu Nwatakiri Akụkọ nke Na -Obi Ọjọọ
Otú ọ dị, n'oge na-adịghị anya mgbe ọ lọghachiri n'egwuregwu Olympic, Kanu nọ na-enyocha ọgwụ na Inter, bụ nke kpughere dị njọ obi nkwarụ.
Enye ama ọfọn ke November 1996 iji dochie ihe valvụ aortic ma laghachighị na klọb ya ruo April 1997. N'ajụjụ ọnụ, Kanu na-ekwukarị okwukwe ya dịka Onye Kraịst ma kwuo ugboro ugboro oge a na-agbalịsi ike nke ọrụ ya dị ka oge mgbe ọ na-ekpegara Chineke ekpere.
Ahụmahụ Kanu mekwara ka ọ bụrụ ntọala Kanu Heart Foundation, otu nzukọ nke na-enyere ọtụtụ ụmụaka Africa aka na-enwe nsogbu obi na ọrụ ha gbasaa iji nyere ụmụ na-enweghị ụlọ na 2008 aka.
Nwankwo Kanu Nwatakiri Akụkọ nke Na -Records
Kanu dị ugbu a na akụkọ ihe mere eme nke Afrika.
O meriri mmeri UEFA Champions League, mmeri nke UEFA, atọ ndi mmeri mmeri FA na ndi oru egwu Afrika abuo n'etiti ndi ozo. Ọ bụkwa otu n'ime ndị egwuregwu ole na ole ka ha merie Premiya Njikọ, FA Cup, Champions League, UEFA Cup na Olympic Gold Gold. O mere nhọta nke atọ na-anọchi anya na akụkọ ihe mere eme na Premier League, na-apụta site na bench 118 ugboro.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Nwankwo Kanu Child Story na akụkọ ndị ọzọ dị egwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.